निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था हटायो नेता भन्छन्- अब कुन एजेण्डा लिएर भोट माग्ने ? – shubhabihani
Home / रास्ट्रिय खबर / निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था हटायो नेता भन्छन्- अब कुन एजेण्डा लिएर भोट माग्ने ?
निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था हटायो नेता भन्छन्- अब कुन एजेण्डा लिएर भोट माग्ने ?
Posted by: admin in रास्ट्रिय खबर March 17, 2017	Comments 40 Views
यसैबीच राप्रपाले भोलि काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरुको आकस्मिक बैठकको बोलाएको छ ।
Previous: गुर्जुधारामा ठूलो दुर्घटना, ब्रेक फेल भएको ट्रकले चार सवारी साधनलाई हान्यो
Next: तराई–मधेसका नेताको दबावपछि गच्छदारलाई कांग्रेसमा ल्याउने प्रयास